Ardayda qaaliga ah, waxaa jira boqolaal casharro ah oo Jarmal ah oo ku yaal boggayaga. Markaad codsato, waxaan casharradan uqiyaasey ardayda dugsiga hoose iyo sare waxaan uqeybiney fasallo. Waxaan uqeexanay casharadeenii Jarmalka oo loo diyaariyey iyadoo la raacayo manhajka waxbarashada qaranka ee laga isticmaalo dalkeena ardayda fasalka 9aad oo aan hoos ku taxnay.
Hoos waxaa ku yaal liiska casharadeenna Jarmalka oo tusay ardayda fasalka 9aad ee waddankeenna oo dhan. Liistada cutubyada Jarmal ee hoos ku qoran waxay u kala horreeyaan mid fudud oo dhib badan. Si kastaba ha noqotee, amarka mawduucyada ayaa ku kala duwanaan kara buugaagta Jarmalka qaarkood iyo buugaagta dheeriga ah.
jagooyinka guud ahaan laga muujiyey fasalka 9aad ee Turkiga waxaa ka mid ah, laakiin lagama yaabo inay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah unugyada iyadoo la raacayo dookhyada macallinka Jarmalka, ama waxaa lagu dari karaa cutubyo gaar ah oo la farsameeyay, cutubyada qaar ayaa loo oggolaan karaa fasalka 10aad ee fasalka xiga.
Casharrada 9aad ee Jarmalka
Salaanta Jarmalka iyo Xeerarka Isbarashada Jarmalka
Tusmada Jarmalka Guud
Qaababka Wadahadalka Guud ee Jarmalka
Jumladaha Salaan ee Salaamaha
Jarmal Aylar, Xilliyo Jarmal ah
Maqaallada qaarkood ee Der Das waxay ku dhintaan Jarmal
Jarmal Wastt das?
Muxaadaro Jarmal Jarmal ah
Jarmal Prasens Sample Cult
Ardayda qaaliga ah, sida ku xusan manhajka waxbarashada qaranka, mowduucyada lagu soo qaatay casharada Jarmalka ee fasalka 9aad waa sida kor ku xusan. Waxaan idiin rajeyneynaa dhamaantiin inaad ku guuleysataan casharradiinna jarmalka
# Casharrada 9aad ee Jarmalka
Tags: 9. casharrada jarmalka, 9. fasalka nasiibka mawduuca, german 9 mawduuca fasalka